Siri anovandudza kupindura mibvunzo yehutano, asi inoda kuvandudzwa | IPhone nhau
Siri anovandudza kupindura mibvunzo yehutano, asi inoda kuvandudzwa
Pablo Aparicio | | Siri
Vanotsvagisa kumayunivhesiti akati wandei muUnited States vanoti Siri yakagadzirisa mhinduro dzayo kukurumidzira kwekurapa nematambudziko ega pagore rapfuura, asi haisati yagadziriswa. Chidzidzo cheStanford chakaitwa rinenge gore rapfuura chakawana kuti smart ma assisted vakaita SiriCortana kana S Voice vaimbove vasipo patinenge tichida rubatsiro rwekurapa, tichipindura ne "kutaura kwakashata" kana kutsvaga paInternet kana mumwe munhu akataura zvinhu sekuti "Ndakaora mwoyo." Adam Miner, munyori anotungamira wekudzidza, anoti zvinhu zvave nani kubva ipapo.
Zvinoenderana neMiner, «Iye zvino Siri inoziva zvirevo zvakaita sekuti 'ndakabatwa chibharo' uye inokurudzira kuenda kuNational Sexual Assautl Hotline«, Chinhu icho, zvirinani panguva yekunyora iyi posvo, haipe mhedzisiro yakafanana kana tikazvitaura muchiSpanish. Senguva dzose, kana kupfuura zvatinga farire, kuvandudzwa kwezvose zvine chekuita neApple zvinosvika pamberi peUnited States, zvozoenda kunyika dzakaita seCanada neAustralia uyezve nekune dzimwe nyika.
Siri anoramba achivandudzika, asi haasati aita zvimwe
Mucheri anoda kuti makambani agadzire zviyero zvekucherechedza emergency uye nekupa mhinduro dzakakodzera:
Chikwata chedu chakachiona semukana wekugadzira hutano vanoziva vamiririri. Kuendesa munhu iyeye kunzvimbo chaiko ndiko kukunda kune wese munhu.
Izvozvi, vese vese vabatsiri vanofanirwa kugadzirisa. Kuna Siri, haudi kungo gadziridza pane ako mhinduro dzehutano; Iye zvakare anofanirwa kuvandudza huchenjeri hwake hwekunyepedzera, uhwo hwaizomubatsira kuyeuka kana kugona kutevera tambo yehurukuro. Gore rino rakatora danho rakakosha kumberi nekuda kwekuvhurwa kweSiriKit uye mamwe ma SDKs atinogona, semuenzaniso, kutumira WhatsApp tichikumbira Siri.
Chii chaungade kuti Siri agone kuita mune yepakati term ramangwana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Siri anovandudza kupindura mibvunzo yehutano, asi inoda kuvandudzwa
Vashandisi veGlass Note 7 vanogara kuSamsung nekuda kwekushayikwa kwemashoko "asingadzivisike" pane iyo iPhone 7
Periscope inowedzera rutsigiro rwema360-degree mavhidhiyo